Mpanamboatra Desander tsara indrindra sy orinasa | SINOVO
Desander dia ampahany amin'ny fitaovana fandavahana fandavahana natao hanasarahana ny fasika amin'ny tsiranoka fandavahana. Ny moka matevina izay tsy afaka esorin'ny shakers dia afaka esoriny. Ny desander dia napetraka taloha fa aorian'ny shakers sy degasser.
Fahafahana (slurry) (m³ / h)
Teboka fanapahana (μm)
Fahafahana misaraka (t / h)
Dimension (m) LxWxH
Ny lanjany (kg)
Mpanamboatra sy mpamatsy entana tsy manara-dalàna ao Shina izahay. Ny andian-tsarimihetsika SD anay dia ampiasaina amin'ny fanazavana ny fotaka ao anaty lavaka. Fampandehanana andian-tsarimihetsika SD: Fampidinana Hydro, injeniera sivily, fananganana d-rindrina D, rindrina, fametahana lavaka mivantana sy fiverenana ary ampiasaina ihany koa amin'ny fitsaboana fanodinana slurry TBM. Izy io dia afaka mampihena ny vidin'ny fanamboarana, mampihena ny fahalotoan'ny tontolo iainana ary mampitombo ny fahombiazany. Izy io dia iray amin'ireo fitaovana ilaina amin'ny fananganana fototra.
1.Ny fampiasana indray ny slurry dia manampy amin'ny fitehirizana ireo fitaovana fanaovana slurry ary mampihena ny vidin'ny fananganana.
2.Ny fomba mivezivezy mihidy ny slurry sy ny atin'ny hamandoana ambany dia mahasoa mba hampihenana ny fahalotoan'ny tontolo iainana.
3.Ny fisarahana mahomby amin'ny sombiny dia mahasoa amin'ny fanatsarana ny fahombiazan'ny pore.
4.Ny fanadiovana feno ny slurry dia manampy amin'ny fifehezana ny fahombiazan'ny slurry, mampihena ny fametahana sy ny fanatsarana ny kalitaon'ny fanaovana pore.
Raha fintinina, ny SD series desander dia manampy amin'ny fananganana tetik'asa mifandraika amin'ny kalitao, fahombiazana, toekarena ary sivilizasiôna avo lenta.
1.Ny efijery miasa mangovitra dia manana taham-pahombiazana ambany ary mora ny mametraka, mampiasa ary mitazona.
2.Ny efijery goavambe mandrisika dia mahatonga ny slag voasarika hanana fiantraikany amin'ny tsy fahampian-drano tsara.
3.Ny efijery mihetsiketsika dia manana fahombiazana avo lenta ary azo ampiasaina amin'ny fandavahana rig fandavahana isan-karazany amin'ny stratum samihafa.
4.Ny tabataban'ny efijery mihetsiketsika dia ambany, izay afaka manatsara ny tontolon'ny asa.
5. Ny hery centrifugal azo ovaina, ny zoro eo amin'ny efijery ary ny haben'ny lavaka ecran
mitazona vokatra tsara amin'ny fisavana amin'ny karazana strata rehetra izy io.
6. Ny paompy slurry centrifugal-mahatohitra mitafy dia miavaka amin'ny rafitra mandroso, universalité avo lenta, fandidiana azo itokisana ary fametrahana mety, fanaparitahana sy fikojakojana; ny ampahany matevina mitondra akanjo sy ny fononteny mavesatra dia mahatonga azy io ho tsara fitaterana mandritra ny fotoana maharitra ny fanakorontanana mahery sy ny slurry mifantoka be
7. Ny hydrocyclone miaraka amin'ny masontsivana mandroso dia manana index index of slurry tsara. Ny fitaovana dia mahazaka-mahatohitra, mahazaka harafesina ary maivana, noho izany dia mora ny miasa sy manitsy, mateza ary mandany vola. Izy io dia mety amin'ny fampiasana maimaimpoana amin'ny fikolokoloana maharitra amin'ny toe-javatra miasa mafy.
8. Ny fitaovana fifandanjana mandeha ho azy vaovao amin'ny haavon'ny ranon-javatra dia tsy vitan'ny hoe mitazona ny haavon'ny rano ao anaty fitoeran-drano fitahirizana, fa mahatsapa ihany koa ny fitsaboana miverimberina slurry ary manatsara kokoa ny kalitaon'ny fanadiovana.
9. Ny fitaovana dia manana tombony amin'ny fahaiza-manao lehibe amin'ny fitsaboana slurry, ny fahombiazan'ny famafana ny fasika ary ny fisarahana avo lenta
Teo aloha: SD2200 Super Rig
Manaraka: Rig fandavahana Core XY-1